Umbhali: Phuhlisa, upapashe, kwaye usebenzise i-Brand yakho yelizwi kunye neSikhokelo seSimbo ngalo Mncedisi wokuBhala we-AI | Martech Zone
Kanye njengokuba inkampani isebenzisa isikhokelo sophawu ukuze kuqinisekiswe ukungaguquguquki kumbutho wonke, kukwabalulekile ukuphuhlisa ilizwi kunye nesimbo ukuze umbutho wakho ungaguquguquki kwimiyalezo yawo. Ilizwi lophawu lwakho libalulekile ukuze unxibelelane nokwahlula kwakho ngokufanelekileyo kunye nokuthetha ngokuthe ngqo kunye nokunxibelelana ngokweemvakalelo nabaphulaphuli bakho.
Yintoni IsiKhokelo seLizwi kunye nesimbo?
Ngelixa izikhokelo zophawu olubonakalayo zijolise kwiilogo, iifonti, imibala kunye nezinye izitayile ezibonakalayo, isikhokelo selizwi kunye nesimbo sigxile kwi-verbiage, isigama, kunye nethoni esetyenziswa luphawu lwakho xa abantu bephulaphule okanye befunda ngawe.
Kukho iinkalo ezininzi zophawu onokuthi uzibandakanye kwilizwi lakho kunye nesikhokelo sesitayile:
Abantu - zeziphi zonke inkcubeko, izibalo zabantu, imfundo, kunye neempawu zejografi zomthengi ojolise kuye?
Ukuqonda - yeyiphi imbono ongathanda ukuba abantu bakho babe nayo malunga nebhrendi yakho?
umsebenzi – ithini ingxelo yenjongo yebhrendi yakho?
ilizwi - yeyiphi ithoni yelizwi onqwenela ukuyisebenzisa ukunxulumana kakuhle nabaphulaphuli bakho? Ngaba uyafuna ukuba ngoongekho sikweni, ube nethemba, unamandla, uyingqayizivele, udlale, ukhuthaze, njl.
Igama elifanayo -Ngawaphi amagama athetha izithethantonye nebrendi yakho, iimveliso, okanye iinkonzo ofuna zisetyenziswe rhoqo?
Isichasi – Ngawaphi amagama akufunekanga asetyenziswe ukuchaza ibhrendi, iimveliso, okanye iinkonzo zakho?
I-hyponymy – sesiphi isigama esithe ngqo kwishishini okanye kumbutho wakho ekufuneka singqinelane?
isiko -Sisiphi isigama esisisiqhelo kuhlobo lwakho, imveliso, okanye inkonzo ekungekho mntu uyisebenzisayo?
Umzekelo: Omnye wabathengi bethu abaphambili ungumnikazi wendawo apho unako oda iilokhwe online. Iilokhwe zinexabiso eliphakathi kodwa zikumgangatho ophezulu, sisebenzisa amagama afana nexabiso elifikelelekayo ngaphezulu kwexabiso eliphantsi… elinokuba nentsingiselo engalunganga yomgangatho. Sikwachaza akukho-ngxaki imbuyekezo kunokuba ngaphandle kobunzima iimbuyekezo. Ngelixa zombini zinentsingiselo efanayo, zinegama khulula kuyo yonke indawo iza kumisela ithowuni engalunganga xa sithetha nabantu abandwendwela indawo - abafazi abadala.
Umbhali: Umncedisi wokubhala we-AI kumaqela
Abantu abaninzi bafaka isikhokelo selizwi kunye nesitayile kunye nesikhokelo esibonakalayo sokwenza uphawu ukuze abasebenzi abatsha okanye iikontraki zingaguquguquki ekuphuhliseni umxholo wophawu. Isenokudityaniswa ngokucocekileyo kwiPDF ehanjiswayo xa iceliwe. Nangona oko kuvakala kuluncedo, akunjalo kakhulu iyasebenza kuba kuphela ngabantu abanomdla wokungaguquguquki kwelizwi lakho abanokubeka ilizwi lakho kunye nesikhokelo sesitayile oza kusisebenzisa.
Umbhali bubulumko bokwenziwa (AI) umncedisi wokubhala wamaqela anayo yonke into efunwa liqela lakho. Ngokuxhomekeke kwiphakheji oyibhaliselayo, ungafumana ezi mpawu zilandelayo:
Lungisa ngokuzenzekela kwaye ugqibezele ngokuzenzekela kupelo, iimpawu zokubhala, neempazamo zegrama.
Iincukuthu - iziqwengana zomntu kunye neqela zamabinzana aqhelekileyo okanye isicatshulwa esisetyenziswa rhoqo.
izindululo – iingcebiso zokuphucula ukubhala kwakho.
I sigama – isixhobo solawulo lwesigama semigaqo evunyiweyo, elindileyo, nengavunyelwayo.
Isimbo sokuBhala -okujoliswe kuko kokufundeka, ukwenziwa koonobumba abakhulu, ubandakanyo, ukuzithemba, kunye nokwenza okucacileyo.
Iindima zeqela - iindima kunye neemvume zokuphuhlisa isigama sakho kunye noseto lwelizwi ngokuchasene nabasebenzisi abafuna ukuzisebenzisa.
Isikhokelo sesimbo -isikhokelo esisindlekwe, esipapashiweyo, kunye nesinokwabelana ngombutho wakho.
Umbhali isebenza kwiChrome, kwiMicrosoft Word, nakwiFigma. Bakwanayo ne-API eyomeleleyo yokudibanisa isixhobo sabo kwiinkqubo zakho zokuhlela.
Zama uMbhali Mahala
Ukubhengezwa: Ndililungu le Umbhali kwaye ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibanisa kulo lonke eli nqaku.
tags: aiIsichasikukubhadla okungeyonyanimission brandimbono yohloboIlizwi lomenzichromeumzoboUkujonga igramaubuxokiigama leMicrosoftPersonaukujonga iziphumlisiupeloisitayile sesikhokeloisithethantonyeisigamaithoniilizwiisikhokelo selizwi kunye nesimboumbhaliumncedisi wokubhala
Yintoni i-Zero-Party, iQela lokuQala, iQela leSibini, kunye neDatha yomntu wesithathu